Woyanaha oo war lagu Qoslo kasoo saaray dagaalada kasocda dhulka Amxarada iyo Tigrega. | ogaden24
Woyanaha oo war lagu Qoslo kasoo saaray dagaalada kasocda dhulka Amxarada iyo Tigrega.
Wasaarada Gaashaandhiga maamulka Woyanaha ayaa war lagu Qoslo kasoo saartay dagaalada Todobaadyadii u dambeeyay sida is daba Jooga ah uga socday, Gobolada Amxarada iyo Tigreega kuwaasi oo khasaare culus lagu gaadhsiiyay ciidanka Woyanah.
Warka kasoo baxay wasaarada Gaashaandhiga ayaa lagu sheegay in ciidan katirsan Jabhada Ginbot 7- oo kasoo Gudbayay xadka Eritrea ay shacabka deegaanka Tigreega iyo maleeshiyadoodu kawar heleen, waxaana ay wasaaradu sheegtay in Hawlgalkii shacabku kaqaaday Ginbot 7- uu Guul kusoo dhamaaday.
Sida lagu baahiyay shabakada Fana 113-Askari oo katirsan ciidanka Jabhada Ginbot 7- ayay shacabka Tigreegu dileen halka 73-kale oo Hubkoodii oo dhan watana Gacanta kudhigeen, warka ayaa lagu sheegay inuusan wax khasaara ah soo gaadhin shacabkii fulinayay Hawlgalkii lagu soo afjarayay ciidanka Jabhada Ginbot 7- ee xadka kaso galay.
Warkani maamulka Woyanaha wasaaradooda Gaashaandhiga kasoo baxay ayaa ah mid muujinaya dhibka ciidamada Woyanuhu kala kulmeen dagaalada ay kula jiraan ciidamada Jabhadaha Hubaysan iyo maleeshiyaadka iskaashanaya, kuwaasi oo Todobaadyadii lasoo dhaafay dagaalo ba’an oo dhex maray ciidama badan oo Woyanaha noloshooda galaaftay halka boqolaal kalana Jabhadaha isu dhiibeen.
In kaste oo warkani yahay mid iska daacayad ah oo ruux kastena fahmayo u jeedada marin habaabinta ah ee laga leeyahay, hadana Jabhada Ginbot 7-wax Jawaab ah kama aysan bixin sheegashada ciidamada Woyanuhu kusheegteen in shacabka Tigreegu nolosha kuqabteen 73- 15-kalan kadileen ciidankooda oo xadka Eritrea kasoo Gudbayay.